Izifanekiso zamahhala ze-Microsoft Word, Excel ne-PowerPoint | Izindaba zeWindows
Izifanekiso zamahhala zeMicrosoft Word, Excel nePowerPoint
Ngendlela yendabuko, zonke izinhlelo zokusebenza eziyingxenye yeHhovisi: iZwi, i-Excel nePowerPoint zisinikeza uchungechunge lwezifanekiso ukuze sikwazi ukudala noma yimuphi umqulu ofikayo engqondweni. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi akukho kulokhu okubonisiwe kufanelana nezidingo zethu.
Ku-intanethi singathola inqwaba yezicelo ezisinikeza izifanekiso zazo zonke izinhlobo, kepha azikho mahhala. Kodwa-ke, iMicrosoft iyasazi isidingo samathempulethi wabasebenzisi abaningi futhi ngokusebenzisa leli khasi lewebhu, singafinyelela inani elikhulu le- Izifanekiso zamahhala ze-Word, Excel ne-PowerPoint.
Inani lezigaba lapho izifanekiso zihlukaniswa likhulu kakhulu, izigaba ezingaphezu kwama-70. Amaminithi, ama-ajenda, ingane, umshado, ubusika, amarisidi, izimvilophu, ukuhlobisa, izikali zesikhathi, izincwajana, amashadi, amabalazwe, amamenyu, ukuhlola, ukubuyela esikoleni ... ezinye zezifanekiso zamahhala esingazithola kule webhusayithi ye-Microsoft.
Ezinye zezifanekiso Zitholakala kuphela ngokusebenzisa okubhaliselwe kwe-Microsoft 365 (okwaziwa ngaphambilini njenge-Office 365). Kodwa-ke, iningi lalawo atholakalayo, singazilanda mahhala ngokuphelele. Vele, uma singenayo inguqulo yakamuva ye-Word, kungenzeka ukuthi ezinye izici azisekelwa.
Landa izifanekiso ze-Word, Excel ne-PowerPoint
Ukulanda izifanekiso ezilingana nalokho esikufunayo, kufanele singene kuthempulethi bese sichofoza inkinobho Landa bese ukhetha Vula nge IZwi (okuzenzakalelayo).
Uma selilandiwe, iZwi lizovuleka ngokuzenzakalela (kulokhu) ngesifanekiso esisilandile. Ukukuhlela, kufanele sisebenzise ukubukwa okuvikelwe, ngokuchofoza ku- Nika amandla ukuhlela etholakala phezulu kwedokhumenti ngaphakathi komugqa ophuzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » General » Imihlahlandlela namathiphu » Izifanekiso zamahhala zeMicrosoft Word, Excel nePowerPoint
Ungasusa kanjani izinketho kwimenyu yokuqukethwe yeWindows
Ngakho-ke ungalanda futhi ufake i-GIMP kwikhompyutha yakho, isihleli sesithombe samahhala